Fihaonana amin'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-02 > Fihaonana amin'i Jesosy
Ny roa tamin'ireo mpiara-miasa tamiko dia nihalehibe tamin'ny paroasy samy hafa. Tsy tadidiko ny niantombohany, fa tonga saina haingana aho fa resaka fivavahana no resahan'izy ireo ao amin'ny birao. Teo aloha koa ny Kristianisma - miaraka amin'ny tsikera mazava. Nahatsapa faniriana mafy aho hilaza amin'izy ireo fa handeha hiangona aho, saingy nangataka azy ireo foana mba hiresaka satria hitako fa tena nahaliana izany. Inona no tao ambadik'ireo hevitra ratsy nataonao?
Samy tsy voadona tanteraka izy roa noho ny fihetsika tsy mendrika nataon'ny mpitondra fiangonana sy ny paroasy sasany. Niala tamin'ny fiangonana izy ireo saingy mbola teo ambanin'ny herin'ny fitondran-tena ratsy. Izany rehetra izany dia nampahatsiahy ahy ny sasany tamin'ireo havako izay tsy te-hanao zavatra intsony amin'ny Fiangonana, izay nanana traikefa nahafinaritra be taona lasa izay. Noho izany dia betsaka ny mpiangona taloha izay tezitra mafy ary sosotra mafy noho ny fiheverana kristiana tsy misy fiheverana sy feno fitiavan-tena.
Azoko atao ny mahatsapa fa ireo voakasik'izany dia tsy te-ho anisan'izany intsony; ny zavatra niainany dia manahirana azy ireo ny mandray ny filazantsara. Misy lalan-kivoahana ve? Heveriko fa ny tantaran'i Tomasy, mpianatr'i Jesosy, dia nanao fanambarana nampahery. Resy lahatra i Tomasy fa diso ny mpianatra hafa - hadalana tokoa ny milaza fa natsangana tamin'ny maty i Jesosy! I Tomasy dia nanana fahalalana marina tsara momba ny zava-nitranga manodidina ny fahafatesan'i Jesosy, ary angamba izy koa no nahita ny nanomboana azy. Ny zavatra niainany dia nilaza taminy fa na inona na inona nolazaina taminy dia tsy tokony ho diso. Avy eo dia nisy fihaonana indray tamin'i Jesosy. Hoy i Jesosy tamin'i Tomasy: "Ahinjiro ny rantsan-tananao, ka jereo ny tanako, ary ahinjiro ny tananao, apetraho eo anilako, ary aza mino, fa minoa!" (Jaona 20,27:28). Nanjary nazava taminy izao ny zava-drehetra. Tsy afaka namoaka fehezanteny fohy fotsiny i Thomas: "Tompoko sy Andriamanitro!" (Andininy ).
Mivavaka aho mba hihaona amin'i Jesosy ny havako sy ny mpiara-miasa amiko ary hofongorany avokoa ny sakana rehetra mba hinoan'izy ireo Azy. Tsy mbola nahita fiovana aho tamin'ny ankamaroan'ny olona nivavahako. Saingy miaraka amin'ny sasany amin'izy ireo, manontany tena aho raha miasa any ambadiky ny sehatra Andriamanitra. Miharihary fa misy fiovana kely amin'ny fihetsika manoloana ny olana sasany. Tsy zava-bita izy ireo, saingy fampahalalana ampy hanosehana ahy hivavaka ho azy ireo hatrany!
Jesosy, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, dia manova ny sain'izay manana olana amin'ny finoana. Mety hiantso ahy amin'ny mpianatra vaovao izy amin'ny alàlan'ny fizarana ny finoako amin'izy ireo. Na izany aza, tafiditra aho, fantatro tsara fa i Jesosy irery ihany no manova ny fanoherana ho amin'ny finoana. Ka mivavaka foana aho mba hihaona amin'ny hafa i Jesosy. Avy eo izy ireo koa, toa an'i Tomasy, dia hahita an'i Jesosy amin'ny hazavana vaovao tanteraka.
nataon'i Ian Woodley